Sonic Mania, umdlalo omangalisayo ohlonipha yonke i-Sonic saga | Iindaba zeGajethi
Sonic Mania, umdlalo omangalisayo ohlonipha yonke i-Sonic saga
Sinomdla ongakaze ubekho kwimidlalo yevidiyo Retro, kutheni usibhanxa. Kakhulu kangangokuba i "mini" iinguqulelo ezindala zeNintendo consoles, kunye nenguqulelo entsha leyo SEGA Ukuzoba kwizikhombisi zabo, bahlala bethengisa kuzo zonke iivenkile abathengisa kuzo. Kwaye ayisiyonto ingaphantsi, sijamelene nesizukulwane se-gamer esingazange sabonwa ngaphambili, ukusukela kwiminyaka eyi-10 ukuya kwiminyaka engama-40.
I-Sonic ibisoloko iyi-flagship ye-SEGA, elingana neNintendo's Super Mario. Kwaye inokuba ngenye indlela, I-SEGA ithathe isigqibo sokuhlawula imbeko kuye kuzo zonke izixokelelwano ezikhoyo I-Sonic mania, Umdlalo omtsha oza kubazisela bonke ngaxeshanye.
Apha sikushiya inokuba yeyiphi i-trailer de I-Sonic mania, inyani kukuba isishiya sinencasa emilonyeni yethu, Phakathi kwabanye sinokubona uSonic kubo bonke ubungangamsha bayo, ekucingelwa ukuba kuya kubakho izikrini ezininzi ezingazange zibonwe ngaphambili, okanye ubuncinci zilungiswe kwakhona abalandeli be-saga. Sijongene nokudibana kwangoko kunye ne-SEGA yeGenesis, loluphi uncedo, ngakumbi xa sijonga ukusebenza komzobo oza kusinika wona Sonic Mania.
Ukususela ngosuku olulandelayo Nge-15 ka-Agasti siza kuba nakho ukukhuphela I-Sonic mania kuzo zombini i-PC kunye ne-Xbox One, i-PlayStation 4 kunye ne-Nintendo switchOko kukuthi, akukho nalinye lawona maqonga asetyenzisiweyo namhlanje aya kulahleka, nangona singathandabuzi ukuba yeyiphi na eya kuthi ikhule kakuhle ikwiNintendo Shintsha, apho ngokungathandabuzekiyo siya kufumana inkuthazo kwiimpawu zokuphatheka, kwaye ukusebenza kwayo kwemizobo kuyasivumela ukongeza kancinci ubomi bebhetri. Ngamafutshane, ukubheja kwe-SEGA kwi-Sonic kwakhona ukubuyisela ixesha elilahlekileyo, nangona ifemu yaseJapan isenokuninzi okuphuhlisayo ukubuyisa intonga yezona zibalaseleyo emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sonic Mania, umdlalo omangalisayo ohlonipha yonke i-Sonic saga
Crash Bandicoot N´Sane Trilogy iyaqhubeka nokophula iirekhodi eYurophu [UPHANDO]
Ukuya kuthi ga kwi-1078 km kunokuhamba ngentlawulo enye kunye neTesla Model X